Ngazi kanjani ukuthi amalangabi amawele akhona ngempela? - Mytika Speak
Ikhaya / Amalangabi Amabili Nothando Olungcwele / Ngazi kanjani ukuthi amalangabi amawele akhona ngempela?
Iningi labantu lizizwa lingenalutho ngaphakathi kubo, okuwukulangazelela uthando oluphelele oluhlangene. Lokhu kulangazelela kungabonakala njengobufakazi bokuthi uthando lwaphezulu kungenzeka.
Uma othile ekwazi ngokweqiniso lokho amawele amabili zingokoqobo, khona-ke amalangabi amawele akhona ngempela kuwo indawo yonke. Uma bengayazi, kusho ukuthi ayikho kubo. Lokhu kuqonda kokuthi ama-universes ngamunye asebenza kanjani kusebenza kuzo zonke izici zempilo yomuntu.
Zonke izindlela engizithathayo,
buyela emuva kuwe.
ungikhombisa imibono yakho.
lokho kuzwakala kuyiqiniso.
Ngikuyeka kanjani okwedlule?
Imizwa izuzisa kanjani?